I-Bill Gates 'yenombolo yamachaphaza' iyazisi engenazingcingo igcina ithatha umkhondo wokuba ingaba une-coronavirus na nokuba ugonyelwe: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	23 Matshi 2020	• 9 Comments
Ngexesha leReddit 'ubuza into oyifunayo', uBill Gates wabuzwa umbuzo malunga nobhubhani we-covid-19. Impendulo yakhe yayityhila. Uthe, "Ekugqibeleni, siya kuba nenombolo yezatifikethi zedijithali ukubonisa ukuba ngubani osanda kulungiswa okanye wavavanywa kwaye ngubani ofumene ugonyo."Ngezo zatifikethi zedijithali, iiBill Gates zinokubhekisa kulo, umzekelo, ezo ziphuhliswe yi-MIT amacotshi amanani (amachaphaza emani).
Isisombululo esingenacingo okunjalo kunokwenzeka ukuba sihambisane nokwaziswa ID2020, efuna ukunika abantu abazizigidi zezigidi ezili-1,2 abahlala ngaphandle kwe-ID isazisi (awunayo ngaphandle kwenombolo). UBill Gates ngumtyali mali omkhulu ngaphakathi zonke ezi zinto Ngomgaqo wakhe weBill & Melinda Gates kwaye ngokucacileyo kuyacaca ukuba siqhubela phambili kwinkqubo yolawulo eza kwamkelwa ngabantu abaninzi ngenxa yokoyika utshaba olungabonakaliyo.
Kubalulekile ukubonisa ukuba abantu bazimisele ukunikezela yonke inkululeko yabo ukuba bayoyika ngokwaneleyo. Olona loyiko lubalaseleyo luloyiko lokufa, kwaye xa sisebenzisana notshaba olungabonakaliyo oluthi bonke abezonyango kunye namajelo eendaba kunye neengcali zezobupolitika basibizela ukuba sizithathele ingqalelo, abantu abaninzi balale emqolo.
Uninzi alunalo ulwazi ngamathuba anokusetyenziswa ngoorhulumente kunye namajelo eendaba ukuba badlale kwisininzi. Ke abantu abaninzi kakhulu kuya kufuneka basebenze kubuxoki. Akukho mntu unokucinga ukuba uninzi lwe-radars kwiwotshi azikuboni ukucofa kwaye ke abanalo ulwazi ngokwabo. Akukho mntu unokukholelwa ukuba uninzi lusenokuba sele lusongelwe, ngokutya kwabo okwangoku kunye nekamva (bacinga) sele kuthengiwe.
Ngaba yoyikeka ngokwenene loo coronavirus? Kuyanceda ke ukuba simazi ngokuthe ngqo ukuba ngubani owosulelweyo, xa umntu ebuyile kwaye nokuba kukho umntu owonzakeleyo nogonyo. Ubuncinci, leyo yinkolelo egxiliswe kwi-masisi. Icala elinokubakho likhona. Oku kubhekisa kude kubonwe njengokucinga ngokungakhathali kunye neqhinga lokucinga.
Kwiiveki ezimbalwa, nabani na ogxekayo uya kuthathwa njengengozi kuluntu. Oku kungenxa yokuba abo bantu banokuba neenkani kwaye babeke abanye engozini; nokuba sele inamathele 'kwizimvo eziphosakeleyo'. Ke tshixa. Emva kwayo yonke loo nto, inyanzelo yokhathalelo lwempilo yezengqondo sele isebenza ukususela nge-1 kaJanuwari.
Ukuba, kwiinyanga ezimbalwa zexesha, sitshintshiwe sivela kwidemokhrasi yenziwa inkqubo yobukomanisi bobuchwephesha kwisithuba seenyanga ngulo mngcipheko we coronavirus, wonke umntu ngoku uxhomekeke kurhulumente ngakwingeniso (jonga le ngcaciso). Leyo karothi iphambi kwesiqwengana sokhuseleko lwezezimali iya kukhuthaza abaninzi ngexesha lothuselo. Uloyiko olubi lokufa kunye nenani elikhulu lokufa (kuboniswe yimithombo yeendaba) liya kuvula indlela yamanyathelo angenanto, apho izinto ezinobungozi ezivela kuluntu (ngaphandle kokukhala) zingasuswa.
Ke inxalenye eseleyo yabemi iya kubambelela kwinkqubo yedijithali eyongamela yonke intshukumo, ukudibanisa umvuzo kunye nenkcitho kunye nenkululeko yokuhamba-hamba nokuziphatha, impilo kunye nokunyanzelwa ngamayeza kunye nogonyo. Apho babecinga ukuba baya kuqinisekisa inkululeko yabo kunye nokukhuseleka ngokubamba isandla sikarhulumente (okanye balwa umgaqo-nkqubo welizwe ngenxa yoloyiko okanye ukuzingcayo), emva koko nabo bayabanjiswa. Akukho nto imi kwindlela yendawo yokugqibela njengoko icacisiwe kwincwadi yam.
Nceda ufunde la manqaku kwiveki ephelileyo, apho ndicacisa imeko engezantsi ngesenkcukacha. Ukuba uyifundile incwadi yam kunye neezongezo zayo, uya kufumanisa ukuba awuyidingi ikhadi lesazisi, amachaphaza e-ID, okanye nantoni na eyimfuneko. Unokufumana nethemba elikhoyo kuye wonke umntu owaziyo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: siencemag.org, id2020.org, banokungoku.com
tags: ityala, coronavirus, Covid-19, amachaphaza, eziziimbalasane, SeSiseko, Gates, ID2020, Melinda, bhe, Ubungakanani, Reddit
24 Matshi 2020 kwi-01: 28
Inethiwekhi yeBill Gates ngokwemvelo ikhokelela kubarhanelwa abaqhelekileyo, iinxalenye zazo zixhaswe imali ecaleni kweMicrosoft, Gavi Unilever, Carbyne, Postcode Loterij, ethi ekugqibeleni ingabi ngaphezulu kwemibutho engaphambili.
Isiporho esibalulekileyo kolu nxibelelwano esinokuthi sinxibelelane no-Epstein sivelisiwe kutshanje.
24 Matshi 2020 kwi-01: 29
24 Matshi 2020 kwi-10: 44
@Salmon, ayimangalisi xa ubona indlela ezenza ngayo iihashe.
24 Matshi 2020 kwi-12: 40
Olu nxibelelaniso kunye ne-ajenda yoKhuphiswano lunomdla kakhulu, luqinisekisiwe kwizitishi ezahlukeneyo.
Udliwanondlebe: Kwimeko awukaphawulwa, Le yiBolshevist Thatha West Wide
NguMyalelo weNkundla yeHlabathi eNtsha yokuphumeza i-Ajenda yowama-2030 kunye 'nobuKomanisi' bayo, obuyiKomanisi nje 2.0.
24 Matshi 2020 kwi-16: 01
Ngokuqinisekileyo i-Unilever iyabandakanyeka ngenxa yezenzo zamvanje, ngaba uRutte akaveli kwi-Unilever?
E-Melika nabo ngequbuliso bazisa uhlengahlengiso loMthetho, kundikhumbuza nge-Patriot Act. Kodwa loo nto iya kuba yeyokwenyani 😉
26 Matshi 2020 kwi-02: 11
UFauci: 'Ngokungathandabuzekiyo' uTrump uya kujongana nesifo esosulelayo esisifo
U-Anthony S. Fauci, MD, umlawuli we-National Institute of Allergy kunye nezifo ezosulelayo, uthe akukho mathandabuzo uDonald J. Trump uza kujongana nesifo esosulelayo esosulelayo ngexesha lobumongameli.
27 Matshi 2020 kwi-05: 44
Kuya kubakho Ukuqhamka Ngokumangalisayo
29 Matshi 2020 kwi-23: 54
I-Bill Gates iyakusebenzisa ukufakelwa kwee-microchip ukulwa i-coronavirus
Ukuchaneka, kunye neMicrosoft kunye ne-Avanade, kudale isazisi somgangatho wokulawulwa kwesazisi kunye ne-blockchain esekwe kwi-ID2020 Summit kwi-UN ngoJuni ka-2017.
30 Matshi 2020 kwi-11: 23
Itekhnoloji yokuhlambuluka kwengqondo ye-dystopia
into eza kuvela lixesha
« I-Coronavirus, uluntu olwenza lukhuni okanye luzuze ubuntu?
Nceda uqaphele: uxwebhu lweCovid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) ngumgibe weendaba ezingezizo »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.327.102